Somalidu Miyey Weli Qiil u Raadinayaan Al-Shabaab 11 sano kadib? • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Somalidu Miyey Weli Qiil u Raadinayaan Al-Shabaab 11 sano kadib?
Somalidu Miyey Weli Qiil u Raadinayaan Al-Shabaab 11 sano kadib?
October 22, 2017 - By: Mohamed Jeenyo
Waxaa hada laga joogaa muddo 11 sano ah markii uu dalka Soomaaliya ka dhacay weerarkii ugu horeeyey oo ismiidaamin ah oo ay geysato kooxda Al Shabaab iyo xagjiriinta Soomaaliya ka dagaalamaya, balse waxaa muuqata in Soomaali badan ay weli si dadban iyo si toos ah qiil ugu raadinayaan kooxdaasi halista ku ah shacabka iyo dalkaba.
18kii bishii September 2006 ayey ahayd markii weerarkii ugu horeeyey oo uu fuliyo qof naftiisa haligay la beegsaday Madaxweynihii dowladii Federaalka ee KMG Allaha u naxariistee Cabdullahi Yusuf Axmed xili uu kasoo baxayey xaruntii fadhiga u ahayd Baarlamaanka ee ku taalay magaalada Baydhabo. Weerarkaasi ayey ku dhinteen ugu yaraan 11 qof oo ay ku jiraan illaalo badan oo la socotay Madaxweynaha iyo Madaxweynaha walaalkiis.
Keydka Sawirada: Ergaygii UNka ee Soomaaliya Francois Lonsény Fall iyo AUN Madaxweyne Cabdullahi Yusuf- Qabashadii Villa Somalia, Muqdisho
AUN. Cabdullahi Yusuf Axmed ayaa weerarkaasi ka badbaaday isla markaana dhaawac fudud oo gubniin ah kasoo gaaray qoorta ama madaxa, qaraxaasi oo gebi ahaan gubay gaarigii uu saarnaa isaga iyo ciidankiisii ayaa xiligaasi lug ku tagay gurigii uu ka degenaa magaalada Baydhabo.
Dad badan ayaa xiligaasi diiday inay aqbalaan in weerar ismiidaamin ah ka dhacay dalka Soomaaliya iyagoo doorbiday inay dhisaan sheekooyin kale ama weerarkaasi u saaraan dalal shisheeye ama sirdoon dal kale nooga soo duulay.
Al Shabaab oo xiligaasi ku dhex jirtay Maxaakiimtii Islaamiga ee qabsaday Muqdisho ayaa bilo kadib weerarkaasi sheegatay markii ay burbureen maxaakiimtii islaamiga, isla markaana Al Shabaab ay noqotay koox gaar u taagan.
Hadaba iyadoo hada la marayo 2017 oo ay soo dhaceen qaraxyo iyo weeraro kuwaasi lamid ah oo ay ku dhinteen dad aan tiro ahaan lasoo koobi karin iyo weerarkii ugu danbeeyey ee 14kii Oktoober, ayaa weli waxa muuqata in Soomaali badan ay weli si dadban u difaacayaan kooxdaasi Al Shabaab.
Kadib weerarkii lagu xasuuqay shacabka ee ka dhacay 14kii bishan Magaalada Muqdisho, waxaa baraha bulshada kusoo batay dad ka faaloonaya weerarkan oo in badan oo kamid ah shaki gelinaya in Al Shabaab weerarkaasi ka danbeysay, qaarkood waxay ku doodayaan in Al Shabaab aysan ahayn oo ay dowlado kale ka danbeeyeen, halka kuwo kale oo kasii xagjirsan ama caadifado kale heyso ayba dowlada lafteeda ku eedeeyeen.
Dadkan ayaa doorbidaya in eeda Al Shabaab meel kale u saaraan si ay xasuuqan uga dhigaan mid siyaasad ka danbeyso balse aysan ka danbeyn xagjirnimada dhiiga badan ku daadisay dalka Soomaaliya iyo caalamkaba, waana midaas tan sababeysa in Al Shabaab aan laga guuleysan muddo dheer maadaama Soomaalida in badan oo kamid ah aysan dhab ka ahayn la dagaalanka kooxdaasi ama aysan u arag xiligan Al Shabaab cadowgooda kowaad.
Kuwa baraha bulshada iyo telefishinada la fadhiya inay shaki geliyaan in weerakrii maatada lagu xasuuqay ay Al Shabaab ka danbeyso ayaa la oron karaa waxay noqdeen afhayeenada ugu weyn ee xiligan Al Shabaab heysato kadib marki ay qabteen olole dacaayad oo ka xun kuwii ay baahin jirtay warbaahita al shabaab afkeeda ku hadasha.
Dowlada iyadu inkastoo ay sheegtay inay Al Shabaab tahay cida ka danbeysa weerarkan, hadana si weyn ayey uga gaabisay shaacinta baaritaanka socda taasi oo qeyb ka ah mala’awaalka ay sameenayaan dad badan.
Illaa iyo hada dowladu nooma sheegin qaabkii iyo cidii fududeysay weerarkaasi, xataa hadii loo turayo baaritaanka socda waxaa lama huraan ah inay dowladu shacabkeeda u sheegto inta eedaysane oo ay gacanta ku heyso sawiradooda iyo eedeynta ama tuhunka loo heysto iyadoo aan faah faahin laga bixin baaritaanka intiisa kale.
Soomaaliya maanta fursad kale uma heysato inay taagnaato meeshii ay taagneyd 2006, waxay u baahan tahay inay meel uga soo wada jeestaan kooxda baneysatay dhiigood ee siyaasadoodu tahay dil iyo duduminta Qaranka Soomaaliya.